तेश्रो त्रैमासमा सिभिल बैंकको छलाङः कोभिड कहरमै खराब कर्जा घटाउने सफलता Bizshala -
इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीच मर्जर सम्झौतामा किन ढिलाइ ? यस्तो छ कारण
कोरोना महामारीबीच यी १० जिल्ला खुल्लै, अन्य ६७ जिल्ला ठप्प
सामाजिक सञ्जालमा सेयर बजारको चर्चा : लगानीकर्ता भन्छन्, ‘अब अर्का युवराज आउँदैनन्’
सरकारद्वारा अक्सिजन कार्यदल गठन, समस्या भए यी नम्बरमा फोन गर्न सकिने
तेश्रो त्रैमासमा सिभिल बैंकको छलाङः कोभिड कहरमै खराब कर्जा घटाउने सफलता
civil bank limited
काठमाण्डौ । सिभिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तेश्रो त्रैमासमा कर्जा तथा ऋण लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तको तुलनामा सिभिल बैंकको निक्षेप ६१.९६ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह ५४.६७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले समीक्षा अवधिसम्ममा ८७.८९ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ८१.४४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ५४.२६ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ५२.६५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
सिभिल बैंकले यस आर्थिक वर्षमा निक्षेपतर्फ रु २७.७६ अर्ब वृद्धि गरेको छ, जुन असार मसान्तको निक्षेपको तुलनामा ४६ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
बैंकको निक्षेपको वृद्धि अन्य वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा वृद्धि रकममा सातौं तथा प्रतिशत वृद्धिमा पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
त्यसैगरी बैंकले कर्जातर्फ यस आर्थिक वर्षमा रु.२७.६२ अर्ब वृद्धि गरेको छ, जुन असार मसान्तको कर्जाको तुलनामा ५१ प्रतिशतको वृद्धि हो । बैंकको कर्जाको वृद्धि अन्य वाणिज्य बैंकहरुको वृद्धिको तुलनामा वृद्धि रकममा दशौं तथा वृद्धि प्रतिशतमा पहिलो स्थानमा रहेको छ ।
तेस्रो त्रैमासको अन्तसम्म बैंकको ग्राहक संख्या ५ लाख ४१ हजार ९८२ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा २४.७६ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको ग्राहक संख्या ४ लाख ४२ हजार ४४२ थियो ।
सिभिल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म खराब कर्जा अनुपातमा व्यापक सुधार गरेको छ । बैंकको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले खराब कर्जा अनुपात ६१.८१ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ । गत वर्षको यही अवधिसम्म २.९६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात समीक्षा अवधिमा घटेर १.१३ प्रतिशतमा झरेको हो ।
बैंकले समीक्षा अवधिमा रु ५० करोड २५ लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९.३९ प्रतिशतले बढी हो ।
civil bank limited Q3 077/78
पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिए गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा
इदका अवसरमा एनसेलको नयाँ योजना : हरेक दिन स्मार्टफोन जित्ने सकिने
पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनाबाट थप ८८ जनाको मृत्यु, ८८५० संक्रमित थपिए
निषेधाज्ञाका बेला सेयर कारोबार राफसाफमा समस्या ! के भन्छन् ब्रोकर र धितोपत्र बोर्ड ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयप्रति अफिनको खेद, प्रतिकूल परिणामको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने चेतावनी
नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, यस्ता छन् बजार घट्नुका कारण
प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि प्रभु इन्स्योरेन्स...
भोलिदेखि बैंकका २५ प्रतिशत शाखा मात्र संचालन गर्न पाइने
काठमाण्डौ । भोलि अर्थात बुधबारदेखि काठमाण्डौ उपत्यकामा बैंकहरुले...
नवीलमा बिलय हुन चाहेका एनबी र एनसीसीमध्ये कुन बलियो, को कमजोर ?
काठमाण्डौ । बैंकिङ उद्योगमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको र...
बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा कडाई, एक चौथाई कर्मचारी
काठमाण्डौ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक चौथाई कर्मचारी...
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्षलाई गभर्नरको क्लास, अनि पास
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्लास...
यस्तो रहेछ नवीलले यूनाइटेड फाइनान्ससँग मात्र मर्जर सम्झौता
काठमाण्डौ । तेश्रो त्रैमाससम्म उद्योगकै सबैभन्दा बढी खूद र...
नवील बैंक र यूनाइटेड फाइनान्सबीच मर्जर सम्झौता
काठमाण्डौ । नवील बैंक र यूनाइटेड फाइनान्सबीच मर्जरका लागि...
महामारीमा महालक्ष्मी बैंकको नयाँ प्रयोग, तोकिए २२ ग्राहक
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सुरु भएको...